10 Xiddig Oo Leeds United Ah Oo Guul Ka Gaadhay Man City, Stuart Dallas Oo Xilli Dambe Dilay Sky Blues & Bielsa Oo Pep Ka Adkaaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha Maanta10 Xiddig Oo Leeds United Ah Oo Guul Ka Gaadhay Man City, Stuart Dallas Oo Xilli Dambe Dilay Sky Blues & Bielsa Oo Pep Ka Adkaaday
10 Xiddig Oo Leeds United Ah Oo Guul Ka Gaadhay Man City, Stuart Dallas Oo Xilli Dambe Dilay Sky Blues & Bielsa Oo Pep Ka Adkaaday
Kooxda Leeds United ayaa guul 2-1 ah ka gaadhay dhigeeda Manchester City walow ay inta badan kulankaas ku ciyaareen kaliya tobban xiddig kaddib markii qaybtii hore kaadh casaan ah loo taagay kabtankeeda Liam Cooper.
Leeds ayaa labada gool ka heshay xiddiga khadka dhexe ee Stuart Dallas halka goolka City uu ahaa mid ka yimid Ferran Torres oo kulankan kusoo bilawday.
Shaxdii Kulanka Ee Labada Kooxood
Leeds United: Meslier, Ayling, Cooper, Llorente, Alioski, Raphinha, Dallas, Phillips, Roberts, Bamford, Costa
Keydka: Steffen, Walker, Dias, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Foden, Garcia
Kulanka ayaa ku bilaabmay qaab furan oo ay labada kooxoodba weerar qaadayaan, fursadii koowaad ee dhab ah ayaa timid daqiiqadii 15-aad markaas oo Roberts uu baas goolka City hor dhigay balse waxa lugta la waayay Patrick Bamford oo kaligii ahaa.
Raheem Sterling ayaa meel fog goolka Leeds ka toogtay daqiiqadii 19-aad balse darbadiisa ayaa noqotay mid aad u sarreysa ee goolka sarre martay.
Daqiiqadii 38-aad Sterling ayaa helay fursad dahabi ah, Fernandinho ayaa kubadda lasoo dhaafay daafaca Leeds waxaana uu meel furan goolka hortiisa kubadda u dhigay Sterling kaas oo laagiisu noqday mid birta hareer mara.
GOOAL: Goolka furitaanka ee kulanka ayaa yimid, Bamford ayaa baas uu helay xerada ganaaxa dhexdeeda kubadda ugu taagay Dallas kaas oo isaguna darbo xoogan oo hoose birta goolka ugu garaacay Ederson kahor inta aysan kubaddu liidka dhaafin.
CASAAN: Garsoore Andre Marriner ayaa kaadh casaan ah u taagay daafaca ahna kabtanka Leeds ee Cooper oo taako xoogan ku qabtay Gabriel Jesus, Cooper oo markii hore jaale la siiyay ayaa kaddib markii uu garsoorku soo eegay aalada VAR uu go’aansaday inuu casaan ugu bedelo.
John Stones ayaa daqiiqadii 47-aad ee qaybta dambe ku dhawaaday inuu goolka kasoo gudo Man City, kubad qalad la dhigay ahayd oo uu soo tuuray Zinchenko ayuu madaxeeyay Stones balse dhinac martay birta goolka.
Bernardo Silva ayaa qarka u fuulay inuu goolka isna keeno isaga oo meel dhaw ku helay kubad soo noqotay balse kubadda oo uu qaab xoogan u laagay hubaalna goolka ku aadanayd ayuu isku dhigay dhinacna u saaray Llorente.
Intaas kaddib fursadaha ay helaysay City ayaa noqday kuwo tiro badan, Cancelo, Fernandinho iyo Gundogan oo bedel isagu kusoo galay ayaa dhammaantood meelo durugsan kubadda kaga laagay goolka balse ma aysan samaynin bar-tilmaameed.
GOOAL: Kaddib dadaal badan iyo fursado deg-deg iskaga soo daba dhacayay, Sky Blues ayaa goolka bar-bardhaca la yimid, Fernandinho ayaa baas u furay Bernardo Silva kaas oo isaguna meel goolka hortiisa ah kubadda ugu baasay Ferran Torres oo markan kubadda dhex dhigay shabaqa goolhaye Meslier.
Xiddiga Leeds ee Raphinha ayaa deg-deg ula orday kubad weerar celis ahayd isaga oo kaligii kula baxay goolka City balse kubadda oo uu isku dayay inuu la dhinac maro goolhaye Ederson ayuu shabaq ilaaliyaha ree Brazil lugaha kaga reebtay.
Bernardo ayaa ku dhawaaday inuu xilli dambe qalbi jabiyo Leeds isaga oo geeska kala soo xarooday kubadda isla markaana toos u toogtay goolka balse laagiisa ayaa dhinaca birta goolka maray.
GOOOOAL: Leeds United ayaa daqiiqadii 91-aad af-jartay Man City, kubad weerar rogaal celis ah ahayd oo ay qaaday kooxda tababare Bielsa ayuu goolka kula baxay Stuart Dallas oo ahaa xiddiga goolka koowaadna dhaliyay isaga oo ka hoos saaray lugaha Ederson kubad joog hoose ahayd.